Iibso 1 Dhalo Tien Chitosan & Tien Cordyceps - Rar Bilaash ah & Cashuur La'aan | WoopShop®
1 Dhalada Tien Chitosan & Tien Cordyceps
$ 83.99 qiimaha joogtada ah $ 89.99
1 Dhalada Tien Chitosan & Tien Cordyceps gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Tien Cordyceps Oo La Kordhiyay Difaaca La Dagaalanka Daalka
Cordyceps wuxuu taageeraa caafimaadka guud ee wanaagsan, wuxuu xoojiyaa iska caabbinta aadanaha ee cudurka, wuxuu dhisaa awood, adkeysi iyo adkeysi. Nidaam tiknoolajiyad sare ah ayaa loo adeegsadaa dhaqanaynta iyo kala soocida 'Cordyceps Mycelium' ee loogu talagalay diyaarinta alaabtan.
Sababtoo ah yaraanta iyo qiimaha sarreeya, Cordyceps marwalba si gaar ah ayaa loogu kaydiyay ku-qanacsanaanta Imbaraadoorrada; iyo ilaa dhowaan, waa wax aan laga aqoon dunida reer galbeedka.
Soo saar 2021
Waxay taageertaa Nidaamka Difaaca: Waxay xoojisaa nidaamka difaaca jirka, waxay yareysaa daalka, waxay kobcisaa firfircoonida, iyo cimri dhererkaba, waxay jirka ka difaacdaa waxyeelada waxyeelada leh ee shucaaca iyo burooyinka sameysma.
Waxay taageertaa Nidaamka Neefsashada: Waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta calaamadaha cudurka neefta iyo boronkiitada, Waxay dhiirrigelisaa shaqada sanbabada ee caafimaadka qabta;
Waxay taageertaa Waxqabadka Kelyaha: Waxay dhiirrigelisaa waxqabadka kalyaha oo caafimaad qaba, Waxay u shaqeysaa sida kilyaha kalyaha;
Waxay kordhisaa waxqabadka maskaxda
Wuxuu hubiyaa shaqada caadiga ah ee xubnaha jirka.
Ugu dambeyntiina, waxaan helay alaabtii. Baakadka ayaa socday muddo dheer, 99 maalmood ilaa Perm. Waan aqbalay sheyga maahan markii ugu horeysay. Waxaan kugula talinayaa alaabta.